Aragtida geospatial iyo SuperMap - Geofumadas
Ogast, 2020 Geospatial - GIS, tabo cusub, SuperGIS
Geofumadas wuxuu la xiriiray Wang Haitao, Madaxweyne kuxigeenka SuperMap International, si ay marka ugu horeysa u aragto dhammaan xalka cusub ee garoonka geospatial, oo ay bixiso SuperMap Software Co., Ltd.
1. Fadlan fadlan nooga warrama safarka isbeddelka SuperMap ee ah keeniyaha Shiinaha ee iibiyaha GIS
SuperMap Software Co., Ltd. waa barnaamij casriyeeyay GIS software iyo adeeg bixiyaasha. Waxaa la asaasay 1997-kii magaalada Beijing (xarunta). Muhiimadda ugu weyn waa in SuperMap uu ahaa shirkaddii ugu horreysay ee liiska software-ka ee GIS laga sameeyo Shiinaha sanadkii 2009. SuperMap wuxuu diiradda saaray sidii loo horumarin lahaa barnaamijyada kombuyuutarrada ee GIS, softiweerka codsiga iyo adeegyada daruuraha qadka ah ilaa markii la aasaasay 1997. Hadda, SuperMap wuxuu gacantiisa la galay wax ka badan 1,000 shuraako cagaaran ah si loo xoojiyo macluumaadka laga helo dowladaha, hay'adaha iyo ganacsatada warshadaha kala duwan. Dhanka kale, SuperMap waxaa ka go'an horumarinta suuqa dibedda. Waqtigaan la joogo, SuperMap wuxuu si guul leh u galay Aasiya, Yurub, Afrika iyo Koonfur Ameerika iyo dalal kale iyo gobollada wuxuuna horumariyey qeybiyayaal iyo la-hawlgalayaal ka kala socda in kabadan 30 waddan oo adeegsadayaasha adeegsada in ka badan 100 dal.
2.Maxay yihiin deeqahaagii ugu dambeeyay?
Wax soo saarkii ugu dambeeyay ee SuperMap waa SuperMap GIS 10i, oo ay ku jiraan GIS Server, Edge GIS Server, Terminal GIS, Platform Online. Intaa waxaa sii dheer, SuperMap GIS 10i waxay isku daraysaa tikniyoolajiyadda AI GIS waxayna sii dardar gelineysaa Big Data GIS, 3D XNUMXD GIS, Cloud Native GIS, iyo Cross Platform GIS si ay u aasaaso nidaam shan teknolojiyad ah oo muhiim ah "BitCC" oo loogu talagalay software GIS software.
3. Doorkee GIS ka ciyaari kartaa maareynta waxtarka leh ee magaalooyinka caqliga leh? Waa kuwee wax soo saarkaaga oo si gaar ah loogu talagalay magaalooyinka caqliga leh? Sidee sheygaagu uga duwan yahay barnaamijyada kale ee caanka ah ee GIS?
Sababo la xiriira dabeecadaha duruufaha, GIS waxay door muhiim ah ka cayaartaa magaalooyinka caqliga leh. Marka hore, macluumaadka la xiriira GIS waa macluumaadka aasaasiga ah ee maareynta magaalooyinka caqliga leh; tan labaad, GIS waxay siisaa adeeg bixiye wax ku ool ah noocyo kala duwan oo ah codsiyada macluumaadka magaalooyinka ee isku dhafan, kuwaas oo ka caawin kara is dhexgalka wax ku oolka ah ee ilaha macluumaadka iyo gaarista horumar wanaagsan iyo ka faa'iideysiga ilaha; Saddexaad, isticmaalka tikniyoolajiyadda GIS waxay ku siin kartaa taageero aragtida juquraafiyeed, go'aan juqraafi, qaab dhismeedka juquraafiyeed, iyo xakamaynta juqraafi ee barnaamijyada magaalada ee caqliga leh.
Qeybta magaalooyinka caqliga leh, SuperMap waxay bixisaa “hal madal, hal shabakad, hal garoon” xalal ku saleysan magaalooyinka, degmooyinka, degmooyinka, jidadka, jardiinooyinka iyo xitaa dhismayaasha. "Hal madal", taas oo ah, nidaamka casriga ah ee xogta ku-meel-gaarka ah ee ku-meel-gaarka ah, waxay bixisaa madal mideysan oo isku-dhafan, maareyn iyo is-weydaarsiga ilaha macluumaadka gobolka. “Shabakad” waxaa loola jeedaa codsiyada maaraynta magaalooyinka, maamulka bulshada, jidadka iyo maamulka miyiga iyo kuwa kale. Maamulka magaalada, waxay bixisaa maareyn dhijitaal ah oo ku saabsan maamulka magaalooyinka, kormeer firfircoon oo ku saabsan xaaladda magaalada iyo falanqaynta iyo go'aan ka gaaridda xaaladda magaalada si ay si dhammaystiran u horumariso heerka maamul magaalooyinka. "Hal la xareeyay", oo ah, waxaa loola jeedaa jardiinooyinka smart, beeraha smart iyo codsiyada kale, inta badan qaab beero iyo goobo. Waxay isku daraysaa BIM iyo GIS si ay u bixiso adeegyo la safeeyey iyo codsiyada maaraynta ee qorsheynta garoonka iyo beeraha, dhismaha iyo maareynta, iyo kor u qaadista awooda adeegyada maareynta iyo tartanka garoonka.
Marka la barbar dhigo iibiyayaasha kale ee software-ka ee GIS, SuperMap wuxuu leeyahay faa iidooyin badan xagga xogta waaxda iyo teknolojiyadda cusub ee 3D GIS. Intaa waxaa sii dheer, SuperMap wuxuu ku siin karaa dadka isticmaala xalka guud ee magaalada caqliga leh + qorshaynta magaalooyinka, dhismaha, maamulka iyo kuwa kale.
4. Sidee bay midowga BIM iyo GIS ugu faa iidayaan qaybta dhismaha? Supermap ma awood u yeelatay in ay summad ku samayso dhismaha dhijitaalka ah? La wadaag daraasaddaada is-dhexgalka BIM + GIS ee ugu fiican.
Is-dhexgalka BIM iyo GIS waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala dhismaha inay soo bandhigaan xaaladda dhabta ah ee juqraafi ahaan ku jirta mashruuc si ay si sax ah u qiimeeyaan saameynta deegaanka, u dardargelinta gaarsiinta mashruuca, iyo horumarinta howlaha iyo dayactirka hantida dhameystiran.
Mid ka mid ah kiiska noocan oo kale ah waa Dhismaha Supercent Supervision Platform Platform. Xaaladdan oo kale, is-dhexgalka bilaa-xariirka ah ee BIM iyo GIS wuxuu siiyaa naqshadeynta iyo kooxaha dhismaha macluumaad geospatial macluumaad leh si ay si fiican u fahmaan xaaladaha ugu dambeeyay waxayna ka caawiyaan iyaga inay natiijooyinka si hufan oo sax ah u gaarsiiyaan jadwal dhisme aad u kooban.
Intaa waxaa sii dheer, iyada oo lagu saleynayo farsamooyinka 3D ee GIS ee cajiibka ah iyo xogta IoT, madalku wuxuu siin karaa khabiiro iyo daneeyayaasha kale siman-waqtiga dhabta ah ee horumarka dhismaha qiimeynta iyo maaraynta iyo hagaajinta wareegga nolosha oo dhan.
5. Sidee ayay ku dhaqan gelinta alaabooyinka SuperMap illaa iyo hadda? Tallaabooyin noocee ah ayaad qaadaysaa si aad u kordhiso wacyiga iyo korsashada?
Iminka, “SuperMap waxay leedahay saamiga saddexaad ee ugu weyn suuqa GIS adduunka, iyo qeybta koowaad ee ugu weyn suuqa Aasiya GIS. Dhanka kale, warbixinta ayaa muujineysa in koritaanka degdegga ah ee in ka badan 20 sano, SuperMap Software hadda uu yahay iibiyaha ugu weyn Shiinaha ee GIS, iyo iibiyaasha ugu sareeya ee GIS suuqyada Shiinaha, ”sida lagu sheegay Warbixinta Daraasadda Daraasaadka Suuqa. Nidaamyada Macluumaadka Juquraafi ee ay daabaceen Kooxda La-talinta ee ARC.
Si loo sii wanaajiyo astaanta SuperMap loona kordhiyo korsashada, SuperMap waxay sii wadaa inay diiradda saarto horumarinta iyo bixinta alaabada iyo tikniyoolajiyada horumarsan iyo teknolojiyada warshadaha. SuperMap ayaa ku adkaysatay in tayada ay tahay mudnaanta ugu sarreysa tan iyo markii la aasaasay. Isla mar ahaantaana, xagga meheradda, SuperMap waxay ku soo biirtay la-hawlgalayaasha si ay u fuliyaan iskaashi mashruuc, iyagoo bixiya xalal warshadeed oo kala duwan iyo dalabyo. Intaa waxaa sii dheer, SuperMap waxay xiriir wanaagsan la leedahay jaamacado badan oo adduunka ah waxayna gacan ka geystaan ​​bixinta barnaamijyo kombuyuutar iyo taageero farsamo oo loogu talagalay waxbarashada wanaagsan ee GIS. Intaa waxaa sii dheer, SuperMap waxay horumarisay barnaamijka SuperMap GIS ee soodeelka ah iyo sidoo kale SuperMap iClient iyo kuwa kale ee adeegsadayaasha liita ee adduunka.
6. Halkee ku aragtaa SuperMap sannadaha soo socda?
Mustaqbalka dhow, SuperMap wuxuu si firfircoon uga qeybqaadan doonaa qaybaha naqshadeynta magaalooyinka, magaalada smart, BIM + GIS, AI GIS iyo kuwa kale, marka loo eego horumarinta tikniyoolajiyada SuperMap ee Big Data GIS, 3D GIS, AI GIS, iyo sidoo kale noocyada isticmaaleyaasha iyo saldhigyada adeegsadaha ee adduunka oo dhan sida dawladaha, jaamacadaha.
7. Tallaabooyin noocee ah ayaad qaadaysaa si GIS looga dhigo mid caqli badan da'da AI?
SuperMap wuxuu soo saaray SuperMap GIS 10i Shirweynihii Tiknoolojiyadda ee GIS Software ee 2019. SuperMap GIS 10i wuxuu si buuxda isugu daraa tikniyoolajiyadda sirdoonka ee macmalka ah si looga dhiso nidaamyada teknolojiyadda "BitCC", oo dhowaan AI GIS ku daray nidaamka wax soo saarka.
Loogu talagalay AI GIS, waxay ka kooban tahay 3 qaybood:
GeoAI: Falanqaynta xog-ururinta iyo ka baaraandegista algorithm ee isku-xidhka AI oo ah wax soo saarka AI iyo GIS.
AI ee GIS: Adeegsiga awoodaha AI si kor loogu qaado astaamaha software GIS iyo khibradda adeegsadaha.
GIS ee AI: adeegsiga falanqaynta GIS iyo tikniyoolajiyadda muuqaalka si loo fuliyo aragtida xayeysiinta iyo falanqaynta heerka dheeri ah ee natiijooyinka wax soo saarka AI.
SuperMap wuxuu ku dhaqmi doonaa si ka sii fiican GIS ayagoo raacaya tusaalihii hore ee 'IA GIS'.
8. Maxay yihiin heerarka ugu mihiimsan ee software-kaaga u adeegsan karo wada-shaqeynta la leh geospatial, injineernimada iyo warshadaha howlaha?
Sanadkii 2017, SuperMap wuxuu furtay qaabeyn heer sare ah oo heer 3D ah oo ah nooca loo yaqaan 'S3M' oo loogu talagalay soo dejinta deg degga ah, gelinta, muujinta xogta baaxad weyn ee 3D ee geospatial guud ahaan aaladaha badan iyo aaladaha. Oo waxay awood u siisay ma ahan oo keliya aragtida, laakiin sidoo kale weydiinta 3D ee wareega iyo falanqaynta xogta baaxadda ballaaran ee xayawaanka. Intaa waxaa sii dheer, S3M waa heerka ugu horreeya ee xogta kooxda oo ay daabaceen Ururka Shiinaha ee Bulshada Macluumaadka Macluumaadka Geospatial. Hadda S3M waxaa si ballaaran loogu qaatay in ka badan 20 shirkadood oo caan ah oo ka shaqeeya warshadaha kala duwan, sida DJI, Altizure, iwm.
Post Previous«Previous Iskodland waxay ku biirtay Heshiiska Qeybta Dadweynaha ee Geospatial
Post Next Leica Geosystems waxay ku daraysaa xirmo cusub oo ah baaritaanka laser 3DNext »